अरुलाई हँसाउने धुर्मुस सुन्तलीलाई यो कस्तो पीडा ? भिडियो हेर्नुहोस् – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/अरुलाई हँसाउने धुर्मुस सुन्तलीलाई यो कस्तो पीडा ? भिडियो हेर्नुहोस्
काठमाडौं ०५ फागुन / लामो समय संघर्ष गरेर कलाकारितामा उच्च पहिचान बनाइसकेका बहुचर्चित जोडी सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुन्जना घिमिरे सुन्तलीको चलचित्र ‘सेन्टि भाइरस’ यहि फागुन ०९ गते शिवरात्रीको अवसरमा देशभर प्रदर्शन हुँदैछ । चलचित्रलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा धुर्मुस सुन्तली, दयाहाङ राई, विल्सन विक्रम राई, सन्दिप क्षेत्री लगायतका थुप्रै चर्चित कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ।
२०७२ सालको विनाशकारी महाभुकम्प पछि कलाकारितालाई थाति राख्दै दिन रात, भोक तिर्खा नभनि सामाजिक कार्यमा होमिएका धुर्मुस सुन्तलीले थुप्रै नमुना बस्ती निर्माण गरिसकेका छन् । नमुना नेपाल बनाउने उदेश्यका साथ सामाजिक काममा लागेका धुर्मुस सुन्तलीले अहिले चितवनको रामपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।
दुई बर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरि निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम तिव्र गतिमा भइरहेको छ । रंगशाला निर्माणमा लागेका धुर्मुस सुन्तलीले रंगशालालाई थप सहयोगको चलचित्र निर्माण गरेका हुन् । चलचित्र सेन्टि भाईरसबाट आएको नाफाको आधा रकम रंगशाला निर्माणमा खर्चिने धुर्मुस सुन्तली जानकारी दिएका छन् ।
चलचित्र सेन्टी भाइरसको दुईवटा गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ,। प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा धुर्मुस सुन्तली यतिबेला प्रचारप्रसारमा दौडधुप गरिरहेका छन्, आफैले जन्माएको चर्चित हास्य टेलिसिरियल मेरी बास्सैमा धुर्मुस सुन्तली सेन्टी भाइरस प्रचारप्रसारको लागि फर्किएका छन् ।
धुर्मुस सुन्तली सँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् :
चलचित्र सेन्टि भाइरसबाट कुन्जना घिमिरे सुन्तली पहिलोपटक स्लो नायिकाको रुपमा देखा पर्दैछिन्। सुन्तलीले यसअघि कुनै पनि चलचित्रमा काम गरेकी छैन ।
चर्चित हास्य टेलिसिरियल मेरी बास्सैमा श्रीमानश्रीमती बनेर अभिनय गर्दागर्दै प्रेम विवाह गरेका धुर्मुस सुन्तलीको एक छोरी छिन् । एक्ली छोरीलाई परिवारको साथमा राखेर देशका लागि केही गर्छ भन्ने राष्ट्रभाव मनमा लिँदै सामाजिक काममा लागिपरेका धुर्मुस सुन्तलीले चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन रंगशालालाई दिल खोलेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भक्तपुरमा बाबु आमा र छोराको यस कारण सँगै ज्यान गयो, सुतेकै अवस्थामा कसैले गरेको खुलाशा,प्रहरिले खोल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)